Dhiibaato ka heysta lanta shaqada caawinta qaxootiga soo badanaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mikael Sjöberg, agaasimaha guud ee Arbetsförmedlingen. Foto: Sveriges Radio.
Dhiibaato ka heysta lanta shaqada caawinta qaxootiga soo badanaya
La daabacay tisdag 11 november 2014 kl 11.16
Laanta shaqada Arbetsförmedlingen ayaa dhibaato u aragta sida ay ku caawin karto magangeliyo doonka la filayo in ay soo garaan Sweden sannadka soo socda.
Laanta socdaalka Migrationsverket ayaa saadaal ay dhawaan sameysey ku sheegtay in qaxootiga Sweden soo gaaraya sannadka soo socda ay tiradiisa u dhaxeyn doonta 80 illa 105 000 ruux.
Arbetsförmedlingen oo illaa iyo sannadkii 2010 haysey masuuliyada ah meeleynta iyo shaqo geynta soo galootiga dalka ku cusub, ayaa imminka lacagta iyo shaqaalahuba gabaabsi ku yahiin . Mikael Sjöberg waa agaasimaha guud ee laanta shaqada arbetsförmedlingen. Waxuuna sheegay in imminka ay xaaladda ku xun tahay Arbetsförmedligen.
- Xaaladda meel xun ayey mareysaa. Dadka waddanka imaanaya imminka aad ayey u badanyahiin. Waxaa loo baahanyahay in dadkas iyo kuwo horey waddanka u deganaaba nidaamku in uu si wanaagsan ugu shaqeeyo. Sidoo kale waxaan qabaa in kalsoonida dadka ku qabi karo socdaalka iyo is dhexgalka ay ku dhisan tahay in ay arkaan shaqooyin iyo waxbarasho ay helayaan dadka soo galootiga ah, ayuu yeri agaasimaha guud ee laanta shaqada Mikael Sjöberg.
Xaaladda waxay mareysaa heer halkii gacanyaraba uu masuul ka noqdo illla iyo 90 ruux oo dalka ku cusub, taasna ma ahan mid caqligal ah ayuu yri Mikael Sjöberg.
- Nidaamnka waxuu u sameysanyahay wax aan niraahno halkii gacanyareba in uu masuul ka ahaado 30 ruux. Hadda waxaan mareynaa heer halkii gacanayraba uu masuul ka noqdo illa iyo 60 ruux oo Swedn dhawaan soo gaaray. Waxaan ku soconaa heer halkii gacanyareba ay ku soo aado 80- 90 ruux. Dabcan taas dadka oo dhan waa fahmi karaan in ay yareyneyso fursadaha howlwadeenadeenu shaqo wanaagsan ku qaban karaan. Waxayna ka micno tahay in dadyowga dalka soo gaaraya aanan siin karin caawinaad shaqsiyadeysan iyo qorshayaal waanagsan, ayuu yeri.
Saameyneys is dhexgalka
Mikael Sjöberga ayaa intaas raacinyey in dayowga dalka soo gaaraya ay kalo baahiyo gedisan yahiin. Oo dhibaatooyinka jiraa ay ka mid yahiin fursadaha howlwadeenada Abetsförmedlingen ku qaabili karaan ruuxa qaab shaqsiyadeysan oo yar – taas oo ka micno ah in ruux tacliintiisa hooseyso la siiyo qorsho la mid ah tan la siiyo ruux ay tacliintiisa koreyso. Ayna waqti dheer qaadato qorsha meeleynta ruuxa waayo buu yeri waxaa kordhay waqtiga uu ruuxa safka ku jiro oo sugayo in uu gacayarahiisa la kulmo. Saameyn ayey taas ku leedahay is-dhexgalka, waxayna dib u dhigeysaa shaqo iyo waxbarasho helida ruuxa dalka ku cusub, sida uu yeri agaamsimaha laanta shaqada Mikael Sjöberg.